Home Wararka War Deg Deg ah Ciidankii xasilinta muqdisho ee ku sugnaa Xarunta Xisbiga...
War Deg Deg ah Ciidankii xasilinta muqdisho ee ku sugnaa Xarunta Xisbiga Oo Hubka dhigis lagu sameeyay
Wara goordhow naga soo gaaray Xarunta Xisbiga oo ku taala Degmada Warta Nabada ee Magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in Ciidamo aad ufarabadan oo ka tirsana kuwii xasilinta ee kusugnaan jiray isgoosyada muqdisho in hubka dhigis lagu sameeyay.
Ilo Xog ogaal ah ayaa inoo sheegay in ciidankii xasilinta ee lagu xareeyay xarunta Xisbiga gabi ahaan hbukii laga qaaday waxaana sidookale la sheegaya in la dul dhigay ciidan ka tirsanmkuwa Malatariga Soomaaliya.
Sidookale ila wareedyo kale ayaa inoo xaqiijiyay inay socdaan qorshe gabi ahaa lagu bur burinayo ciidabnka xasilinta oo figrad ahaa dhisidooda lahaa ra’isul wasaaraha Xukumada Xasan Cali Khayre.
Dhawaanahan waxaa jiray qilaaf Xoogan oo udhaxeeyay Madaxweyne Farmaajo iyo Rw Khyare waxuuna qilaafkaas sameyn ku yeeshay Ciidamada Dowlada qeyba hooda kala duwan waxaana socdo xifaaltan adag oo udhaxeeyo Farmaajo iyo khayre.
Madaxweyne Farmaajo ayaa fashiliyay qorshayaashii Khayre oo ahaa inuu ku amar taagleeyo shacabka muqdiso waxuuna furay wadyooyin oo amray khayre in la xiro Waxuuna meesha ka saaray Ciidankii sida gaarka ah kaga amar qaadan jiray Khayre ee xasilinta iyagoona ugu danbeyn Maanta lagu sameeyay Hubla dhigis.
Previous articleShirkadaha Daalo iyo Jubba Oo ku guulestay Daabulista Xujeyda Soomaalida&Shirkadihii uu taageerayay Khayre Oo fashilmay
Next articleWarar dheerad ah Oo Ka Soo baxayo ciidankii Xasilinta Caasimada oo Hubkii Laga qaaday & Firxadkooda Oo Lagu arkayo Degoomiykna Muqdiho
Al Shabaab Oo Qaraxyo Ku Xiray Meydadka Ciidamada Dowladda
Magaalada Muqdisho oo Halis ugu Jirta In Qaraxyo Ismiidamin Ah ay...